Siilaanyo oo Sheegay in Boolisku ka Horjoogsadeen ka Qaybgalka Xuska Qaraxyadii Hargeysa | Somaliland.Org
Siilaanyo oo Sheegay in Boolisku ka Horjoogsadeen ka Qaybgalka Xuska Qaraxyadii Hargeysa
October 30, 2009	Axmed-Siilaanyo oo Sheegay in Boolisku ka Horjoogsadeen ka Qaybgalka Xuska Sannad-guuradii 1aad ee Qaraxyadii Hargeysa
Hargeysa (Jam)- Guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee KULMIYE Md. Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo), ayaa shaaca ka qaaday in ciidammada boolisku ka horjoogsadeen ka qaybgalka xuska sannad-guuradii koowaad ee ka soo wareegtay weerarradii argagixiso ee 29kii October 2008 ka dhacay Hargeysa oo lagu qabtay shalay xarunta Madaxtooyada Somaliland.
Axmed-Siilaanyo oo shalay kadib munaasibadii baroor-diiqda ahayd ee ka dhacday xarunta Madaxtooyada u warramayey, waxa uu ayaan-darro iyo wax laga xumaado ku tilmaamay qorshaha ciidammada bilaysku ugu diideen ka qaybgalka xus baroor-diiq ah oo shalay Madaxtooyada loogu sameeyey dadkii ku dhintay qaraxyadii 29kii October 2008 kooxaha argagixisadu la beegsadeen goobo muhiim ah oo ku yaal caasimadda Hargeysa.
“Maanta waxa aynu xusaynaa maalintii falka argagixisa ah la inugala kacay ee 29-kii October 2008-dii, innaga oo dadkeenii isku xidhan yihiin, qarannimadeenii jirto, dawladnimadeeniina jirto, taasina waa mid aynu ku faanayno, laakiin waa mid aynu mar walba xusuusnaanayno in khatarihii inagu xeernaa ay weli inagu xeeran yihiin oo aynu mar walba u baahannahay feejignaan, wada-jir iyo midnimo aynu ku ilaashano dadkeena iyo dalkeena iyo madaxbannaanideenaba,” ayuu yidhi Axmed Siilaanyo.
Axmed Siilaanyo waxa uu sheegay in ciidan boolis ah oo shalay xidhay jidka Madaxtooyada hor mara ka hor istaageen inuu u soo gudbo dhinaca Madaxtooyada oo uu damacsanaa inuu kaga qaybgalo xaflad baroor-diiq ah oo lagu qabanayey.
Isagoo arrintaa ka hadlayeyna waxa uu yidhi; “Waxaan-se aad uga xumahay, maanta oo ay ahayd in xuska halkaas [Madaxtooyada] la isugu tako in sidii la doonayay aanu u dhicin. Maanta aniga oo haysta waraaqdii [marti-qaadkii] ayaa qolada booliska nabadgelyada waddooyinku ay halkaas iga celiyeen oo halkaas la ii ogolaan waayay aniga oo isu sheegay. Markaa arrintaana aad iyo aad ayaan uga xumahay. Waxaana ay ka mid tahay qaab-xumada iyo farsamo-xumada uu maamulka maanta jiraa wadanka ku hayaan, xitaa maalmaha caynkaaas ah qiimaha dalka u leh. Anigu garanmaayo sida ay ku dhacdaye, madax kale oo badan ayaa halkaas ka maqnayd.”
“Markaa kolayba aniga ta igu dhacday taas ayay ahayd, kolkaas waa ayaan-darro waxaana ay ka mid tahay arrimaha foosha xun ee sida qaabka daran loo wado. Arrintaasi waa mid aan aad iyo aad uga tacsiyeynayo ummada reer Somaliland,” ayuu hadalkiisa ku soo gebogabeeyey Guddoomiye Axmed Siilaanyo.